Waan-waan nabadeed oo lagu xallinayey xiisadihii colaadeed ee Karkaar oo meel waanagsan maraya. – Radio Daljir
Qardho, Oct 05 ? Dadaallo nabadeed oo aad u xooggan ayaa ka socda deegaanno miyi ah oo ka tirsan gobolka Karkaar ee maamulka Puntland halkaasi oo dhawaan ay ka soo cusboonaaday xiisad colaadeed oo u dhaxeeyey beelo ood-wadaag ah oo deegaankaasi wada deggan.
Odayaal dhaqameed, indheer-garad iyo mas?uuliyiin dawladda Puntland ah ayaa ku sugan deegaannada Xumbays iyo Uur-jire ee degmada Rako-raaxo ee gobolka Karkaar, kuwaasi oo wada waanwaan nabadeed oo looga golleeyahay xal-ka-gaaridda xurguftaasi colaadeed.
Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cali Hayaan, oo maanta ka warramay Radio Daljir ayaa sheegay in arrintu haatan marayso meel-wanaagsan is-faham weynna laga gaaray mushkiladdii colaadeed, waxaana uu intaasi ku daray in uu ku han-weyn yahay dib dambe in aysan u dhicin falalkii horay u dhacay oo kale.
Agaasimuhu, waxaa uu sheegay dadka wax dhex-mareen in ay yihiin dad ehel ah oo wada dhashay, wax badanna ay ka dhexeeyeen, taasina ay sahashay durbo in uu soo dhalaalo is-faham iyo isku-tanaasul la xiriir dhibaatadii ka dhex-dhacday.
Xiisaddaan colaadeed ee haatan lagu hawlan yahay xal-ka-gaariddeeda ayaa oo ka curatay dhul-deeqsimeed iyo biyo roobeed oo dhawaan da?ay, taasoo sababtay dhimashada ka badan 10 ruux halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen.